တူရကီမှပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်!! လေဆိပ်များကို Covid-19 လက်မှတ်ရလိမ့်မည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေတူရကီမှပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်! လေဆိပ်များကို Covid-19 လက်မှတ်ရလိမ့်မည်
22 / 05 / 2020 အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Adil Karaismailoğluက ၀ န်ကြီးဌာနအားလုံးသည် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရာတွင်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနအနေနှင့်ကာရာမိုင်စမိုလူးကပြောကြားသည်မှာ၎င်းတို့သည်လေဆိပ်အတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလေဆိပ်အားလုံးအားပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အစီအစဉ်ဖြင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်သိပ္ပံကော်မတီ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်အညီအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၀ န်ကြီးကရာမိုင်စယ်လလိုကပြောကြားသည်မှာ“ လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအစီအစဉ်အတွက်မြို့ပတ်ကိုလေဆိပ်အားလုံးသို့ပေးပို့ပြီးပို့ခဲ့သည်။ မြို့ပတ်ရထား၏နယ်ပယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ပြလေကြောင်း ၀ န်ကြီးဌာနကိုအကြောင်းကြား။ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောလေဆိပ်များကို ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဤလက်မှတ်ကိုမိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့်လေကြောင်းလိုင်းများနှင့်လည်းမျှဝေသွားမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လေဆိပ်များ၌ Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုကိုဆန့်ကျင်သောလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
Karaismailoğluကလည်းပြောကြားခဲ့သည်မှာလေကြောင်းလိုင်းများအတွက်ပျံ့နှံ့မှုကာကွယ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြသထားသည့်မြို့ပတ်ရထားသည်လည်းပြင်ဆင်မှုအဆင့်တွင်ရှိနေသည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤစာတမ်း၏မူကြမ်းကိုပြင်ဆင်ထားကြောင်းရှင်းပြကာ ၀ န်ကြီးကရာမီစိုင်လောင်ဂလိုက“ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနရဲ့ထင်မြင်ချက်အရထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပြီး Covid-19 ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုမှတ်ပုံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လေဆိပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ကြီးဌာနမှဆုံးဖြတ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြား ၀ န်ကြီးဌာနများက ၀ ယ်ယူသည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကိုလည်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ”
Karaismailoğlu, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်နေရာထိုင်ခင်း၏သက်ဆိုင်သူအားလုံး၏လိုအပ်ချက်များကိုဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ဖြစ်နိုင်ချေများပေါ်ပေါက်လာမှုသည်တိုင်းပြည်အားပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများအားတူရကီနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးKaraismailoğluက“ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအားလပ်ရက်အပြီးစတင်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများအတွက်အခွင့်အရေးကိုဖန်တီးခဲ့တာပါ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်။ ဒီစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းခရီးစဉ်ကိုလုံခြုံစွာစတင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Karaismailoğluက Covid-19 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နောက်ထပ်စည်းမျဉ်းတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၀ န်ကြီးKaraismailoğluမှကြေငြာချက်တွင်ပါ ၀ င်သောလက်ဆေးပိုးသတ်ဆေးများသည်အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများနှင့်ကူးစက်ခံရသည့်သွေးနမူနာများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောကုန်စည်များသက်တမ်းတိုးခြင်း၏သက်တမ်းကာလများကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးသက်တမ်းတိုးခြင်းကို ၄ လအထိတိုးချဲ့နိုင်သည့်သက်တမ်းတိုးသင်တန်းများအတိုင်းအတာကိုသြဂုတ်လ ၃၁ ရက်အထိတိုးချဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ "လက်မှတ်အားလုံးထည့်သွင်းရန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ "
Covid-19 Pandemisi ကလေဆိပ်တွေကို Ghost Town အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်
တူရကီအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, TCDD အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ချီးမြှင်
Records ကိုတူရကီအတွက် xnumx` လေဆိပ်နှင့်အတူပို့ဆောင်ကုန်တင်၏ပမာဏအတွက်ကျိုးပျက်ခဲ့သည်
Coronavirus ဆိုတာဘာလဲ။ Covid-19 ၏လက္ခဏာများကဘာလဲ။ Covid-19 မှမည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်း။
Atatürkနှင့် Sabiha Gökçenလေဆိပ်, မီးရထား Connections ကို
DHMİက ISO 27001 သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်